Taariikhda Manchester United iyo Maltas ee martigalinta guusha leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Taariikhda Manchester United iyo Maltas ee martigalinta guusha leh
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jabhada Malta • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Sports • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
L to R - Bryan Robson iyo Denis Irwin © Booqo Malta/Manchester United
Danjireyaasha Manchester United Bryan Robson iyo Denis Irwin (halyeeyada) ayaa u duulay Malta xagaagan si ay u arkaan naftooda waxa Jasiiradaha Maltese ay bixiyaan, iyo sababta ay mar walba u badan tahay sahaminta.
Wadashaqaynta rasmiga ah ee u dhaxaysa VisitMalta iyo astaanta kubbadda cagta ee Manchester United ayaa daaha ka qaadday taariikhda dheer ee guusha leh ee Malta ee martigalinta.
Halyeeyada naadiga sida Denis Irwin iyo Bryan Robson waa talaabo kale oo horay loo qaaday si loo soo bandhigo Jasiiradaha Maltese ee daafaha dunida.
Taxanaha afarta qaybood ka kooban waxay arkayaan iyagoo gacmahooda ku tijaabinaya isboortiga biyaha, galaas-afuufaya, iyo karinta markay fiirinayaan indha-indheynta.
Wixii ku bilaawday safar caadi ah ayaa isu rogay wax aad u xiiso badan maadaama labada halyeey ay ku xujeeyeen shaqooyinkii ay qabteen ciyaartoydii Manchester United: Paul Pogba, Brandon Williams iyo Lee Grant.
Qeybta koowaad, daawadayaashu waxay arkaan halyeeyada isku day nasiibkooda cayaaraha biyaha ee Comino, ka hor intaan qaybo kale oo taxane ah oo afar qaybood ah lagu arag iyaga oo isku dayaya gacantooda galaas-afuufka Mdina, iyo wax ku karinta Matxafka Badda, laakiin maaha ka hor intaadan eegin qaar ka mid ah indha-indheynta Valletta, joojinta deg -degga Maltese, iyo xitaa sahaminta Aquarium -ka Qaranka Malta.
“Waxaan u maleynayaa in Malta ay weyn tahay! Mar kasta oo aan halkaan imaado, waxaan la yaabaa soo dhaweynta dadka, goobaha waaweyn iyo cuntada wanaagsan, ”ayuu yiri Bryan Robson, iyadoo Denis Irwin uu raaciyay“ waxay dareemeysaa wax gaar ah in la ogaado in Malta iyo Manchester United ay leeyihiin taariikh waxay dib ugu noqotaa tobanaan sano, taas oo kaliya ka kori karta xoog ilaa xoog, taas oo macnaheedu noqon karo kaliya inaan helno fursad aan mar walba ku helno sabab aan uga mid noqon karno saaxiibadeena Malta, kuwaas oo ah ficil ahaan qoyskeena ballaaran. ”
Ugu dambayntii waxaa jiri kara hal guuleyste, Gozo wuxuu ahaa meesha ugu habboon ee ku dhawaaqista Hon. Clayton Bartolo, Wasiirka Dalxiiska.
“Iskaashigayaga rasmiga ah ee u socda ee u dhexeeya BooqoMalta iyo astaanta kubbada cagta adduunka ee Manchester United ayaa noo saamaxaysa inaan daaha ka qaadno taariikhda dheer ee guusha leh ee Malta ee martigalinta. Imaatinka laba halyeeyada naadiga sida Denis Irwin iyo Bryan Robson waa tallaabo kale oo horay loo qaaday si loo soo bandhigo Jasiiradaha Malta ee adduunka oo dhan, ”ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska iyo Ilaalinta Macmiilka Clayton Bartolo.
“Waxay farxad u ahayd VisitMalta inay martigeliso Bryan iyo Denis intii ay ku sugnaayeen Malta, taasoo qayb ka ah iskaashiga rasmiga ah ee aan la leenahay Manchester United. Iskaashigan ayaa ahmiyad weyn u leh Hay'adda Dalxiiska Malta, iyo BooqashadaMallta Brand, oo Boqortooyada Midowday ay tahay mid ka mid ah suuqyadeeda ugu xoogga badan, oo, taas oo lagu arko dhammaan taageerayaasha adduunka ee Manchester United, oo ka baxsan xuduudaha Yurub, oo ay ku jiraan Mareykanka, ”Dr Gavin Gulia, Guddoomiyaha MTA ayaa yiri.
Jasiiradaha qorraxda leh ee Malta, oo ku yaal badweynta Mediterranean-ka, waxay hoy u yihiin diirad aad u layaab leh oo ah hidaha la dhisay, oo ay ku jiraan cufnaanta ugu sarreysa ee Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO meel kasta oo ka mid ah qaran-kasta. Valletta, oo ay dhiseen Knights-kii kibirka lahaa ee St. John, waa mid ka mid ah meelaha UNESCO iyo Caasimaddii Dhaqanka ee Yurub ee 2018. Aabbaha Malta ee dhagaxu wuxuu u dhexeeyaa qaab dhismeedka dhagaxa xorta ah ee ugu da'da weyn adduunka, ilaa mid ka mid ah Boqortooyadii Ingiriiska hababka difaaca ee ugu cabsida badan, waxaana ka mid ah isku -dhafka hodanka ah ee dhismaha, diinta iyo dhismaha milatariga laga soo bilaabo qadiimiga, dhexe iyo xilliyadii hore ee casriga ahaa. Iyada oo leh cimilo qorax leh, xeebo soo jiidasho leh, nolol habeennimo oo wanaagsan iyo 7,000 oo sano oo taariikh xiiso leh leh, waxaa jira wax badan oo la arko oo la sameeyo. visitmalta.com
September 23, 2021 at 09: 23
Haddii shirkaddaadu qorshaynayso inay ballaariso hawlgallada Malta, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad guurto. Jasiiraddu waxay udub dhexaad u ahayd taariikhda iyo dhaqanka Mediterranean -ka qarniyo badan, waana lagu raaxaysan karaa mar kale hadda waxay ku taal cagaarka.